Löfven oo doonaya in dhalinyarada la siiyo deyn si ay laysanka u qaataan | Somaliska
Gudoomiyaha xisbiga Socialdemokraterna (S) Stefan Löfven ayaa sheegay in uu doonayo in hay’ada CSN ay dhalinyarada siiyo lacag dayn ah si ay u qaataan laysanka baabuurka (Körkort). Xisbiga Miljöpartiet ayaa dhaliilay qorshaha deynta, iyagoo ku taliyay in Arbetsförmedlingen ay dhalinyarada shaqo raadiska ah lacagta laysanka ka bixiyaan.
Qorshaha Löfven uu soo bandhigay ayaa ah mid lagu doonayo in dhalinyaro badan ay ku dhamaystaan dugsiga sare, iyadoo qorshaha uu yahay in markay dugsiga sare dhamaystaan la siiyo lacag deyn ah oo ay körkort ku qaataan.
“Waxay muhiim u tahay suuqa shaqada. Waxaan ognahay in shirkadaha ay 6 ka mid ah 10 ay shaqaalaha ku xiraan laysanka” ayuu u sheegay wargeyska Expressen.
Dhinaca kale, Esabelle Dingizian oo xisbiga Miljöpartiet (MP) u qaabilsan arimaha dhalinyarada ayaa dhaliishay qorshaha gudoomiyaha S; waxay sheegtay in halkii dhalinyarada la sii galin lahaa deyn dheeri ah, in Arbetsförmedlingen ay lacagta laysanka ka bixiyaan dhalinyarada shaqo doonka ah.
Qorshaha Stefan Löfven ayaan ahayn mid cusub, isagoo u muuqda mid laga koobiyeeyay qorshe midkaan la mid ah oo uu sanadkii 2012 soo jeediyay Amir Adan oo ah wiil Soomaali ah oo baarlamaanka ugu jira xisbiga Moderaterna (M), isagoo waqtigaas ku taliyay in CSN ay dhalinyarada siiso deyn ay laysanka ku qaataan.
Hadaba sidee kula fiican, in aad deyn ka qaadato CSN iyo in Arbetsförmedlingen ay dhalinyarada ka bixiyaan lacagta körkorka? ku darso fikradaada.
Haweenay Soomaali ah oo wali weerar ku haysa diinta Islaamka
Caruurta oo loo fududaynayo sharciyada
Aniga waxaa ila fiican inaan deen laga dhigin lacagta
Aniga waxa ila wanagsa in CSN ta ey sisio denta dhalinyarada lesanka rabts
Ali heyti says:
Aniga waxay ilatahay in uu arbetsförmedlingen ay kabixiyaan dhalinyarada körkorka isagaa uguu muhimaan walibana qofkii xirfad u kushaqayto sobartay si ay ugu fududaato helista shaqada
ASC. Körkortpröv afsomali aya lagu daray, weli qof kumaray afsomali hadey jiraan hanala socod siiyaan walaalayal.
Mardhow ayan rabaa inaan maro teori marka afsomali mise swedish ayaa shaki iiga jirto kaan kumari lahaa.
Meeye dadkii shuruudaha 2 sano u xanibnaa please yaa wax akhbaara haya’ baryahan malaha dadkii 2 sano iyo kuwii kale ee hawlaha ka qabyada ahaayeen wadooyin kale oo ay kaga fursadaan ayay heleen ileen halkan ayaa aaraada ama wixii akhbaara laisku waydaarsan jiray tiina ma jirto. Taasna aadbaan uga xumahay
aniga waxaa ilahaboo in arbetsförmedlingen aay dadka kacaawiso leesinka (körkort)
ASC waan kusalaamay walaalkeey jaabir dadkii labada sano waa iska samreen waxaa layiri qamiis aalaquustaa aniga halsano iyo bilbaan sugayaa DND iyo intrevu marka insha alaah qeer waan arkeeynaa
ANIGA ARINTAAN KÖRKORTKA WAXAA ILA FIICAN CSN,,AF INAAN LESYKU DHIBIN OO AAN DEEYN QOORTA NALOO GALIN + RÄNTA IWM TAAS BADALKEEDA IN QOFTA DH,YARADA AH LASIIYO QAYAASTI 50 000 SEK E LADHAHO IS DEBER LESINA KEENSO SAW RABO HAKU KEENSADO AMA SHURUUDAHA ITIXANADA LAYAREEYO OO AAN CULEEYS LASAARIN SI QOFKU AY UGU SAHLANAATO
rahma ruun says:
August 15, 2014 at 00:28
Waxaan taageersanahay inta deynta nagula badin lahaa in arbetsförmedlingen eey naga bixiso waa codsigeyga wayol ma awoodno in deyn nagula badsho
Ani ahaan waxaan tageraa arbetsförmedlingen in eey naga bixio
Radiya waa samreen dheh dadku alle gaalada cimrigooda hasoo ururiyo.
Masha allah wey fcnn lehed tusalo ahan Denmark qofka cer ta qato wala ga bixiyay siushaqo uhelo
ASC,aniga waxaa ila wanaagsan in aay ka caawiyaan arbetsförmedlingen, waayo deynta aay sheegaayaan waxaa wehliyo + RÄNTA anagana nooma fiicno.